भजनसंग्रह 101 ERV-NE - दाऊदको भजन। म - Bible Gateway
भजनसंग्रह 100भजनसंग्रह 102
भजनसंग्रह 101 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
101 म प्रेम र निष्पक्ष न्यायको गीत गाउनेछु।
परमप्रभु, म तपाईंको निम्ति गाउने छु।
2 म सतर्कतासाथ शुद्ध जीवन जिउनेछु।
म मेरो घरमा शुद्ध प्रकारले जिउनेछु।
परमप्रभु तपाईं मकहाँ कहिले आउनुहुनेछ?
3 म आफू समक्ष कुनै मूर्तिहरू राख्ने छैन,
म त्यस मानिसलाई घृणा गर्नेछु जो तपाईंको विरूद्ध जाँन्छ।
म त्यस्तो घृणित कामहरू गर्नेछैन!
4 म ईमान्दार हुनेछु।
म दुष्टपूर्ण कामहरू गर्नेछैन।
5 यदि कसैले उसको छिमेकिहरू बारे गुप्त भावमा नराम्रा कुराहरू गर्दछ भने,
म त्यस मानिसलाई रोक्छु।
आफूलाई घमण्ड गर्ने र अरू भन्दा म श्रेष्ठ छु भनेर सोंच्नेहरूलाई
म अनुमति दिनेछैन।
6 म मानिसहरूलाई संसारभरि नै हेर्नेछु जसमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ
अनि तिनीहरूलाई मात्र मेरो सेवा गर्न दिन लाउने छु।
खाली त्यस्ता मानिसहरू मात्र मेरो दासहरू हुन सक्छन् जो शुद्ध जीवन जिउँछ।
7 म मेरो घरमा झूटाहरू बस्न दिने छैन।
म झूट बोल्नेहरूलाई आफू नजिक बस्न दिने छैन।
8 यस देशमा बसिरहेका दुष्ट मानिसहरूलाई सधैँ नाश गर्नेछु।
परमेश्वरको शहरबाट जानलाई म ती सब दुष्टहरूलाई बाध्य पार्नेछु।